dhamma Videos - Page 268
ကျေးဇူးသိတတ်ပုံ တရားတော် (၂၁-၄-၂၀၁၆ - လှိုင်သာယာမြို့နယ်) - ဒယ်အိုးဆရာတော် ဥုးသုမင်္ဂလ
(ကျေးဇူးသိတတ်ပုံ တရားတော် (၂၁-၄-၂၀၁၆ - လှိုင်သာယာမြို့နယ်) - ဒယ်အိုးဆရာတော် ဥုးသုမင်္ဂလ ဓမ္မဒါန Dhamma Dana YouTube Channel, http://youtube.com/DhammaDana, also at https://www.facebook.com/DhammaDanaMyanmar) (Please Contact DhammaDana@mail.com if you wish to
http://hdvideonewsjp.blogspot.jp/ တွင် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါကြောင်း
ကျေးဇူးပြစ်မှားဒဏ်ဆယ်ပါး တရားတော် - ဓမ္မရံသီဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ သုနန္ဒ္ဒ
ကျေးဇူးပြစ်မှားဒဏ်ဆယ်ပါး တရားတော် မိုးကုတ်မြို့ ဓမ္မရံသီဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ သုနန္ဒ္ဒ Dhamma Yanthi Sayadaw U Thunanda,(MyanmarNet.Net)
ခေတ်သစ်စိတ္တဗေဒ တရားတော်၁၉-၁၂-၂၀၀၆ - အောက်စဖိုဒ့်ဆရာတော် ဒေါက်တာဦးဓမ္မသာမိ
အောက်စဖိုဒ့်ဆရာတော် ဒေါက်တာဦးဓမ္မသာမိ ဟောကြားတော်မူအပ်သော အခြေခံသတိပဌာန်လုပ်ငန်းနှင့် ခေတ်သစ်စိတ္တဗေဒ တရားတော်၁၉-၁၂-၂၀၀၆ - အောက်စဖိုဒ့်ဆရာတော် ဒေါက်တာဦးဓမ္မသာမိ - Dr. Khammai Dhammasami, DPhil (Oxford) - အဂ္ဂမဟာဂန္တဝါစကပဏ္ဍိတ၊ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဒမ္မဇောတိကဓဇ (ဓမ္မဒါန Dhamma
ခေမာသုတ် (၃၃၆.၁) (၃၄၃/၄၃၅) - ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာတင် တရားတော်များ (1954-1956*)
ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာတင် တရားတော်များ (1954-1956*) မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမေး၍ မင်းကွန်းဆရာတော် ဘုရားကြီးဖြေဆိုသည် - ခေမာသုတ် (၃၃၆.၁) (၃၄၃/၄၃၅) (ဓမ္မဒါန Dhamma Dana YouTube Channel), also on FaceBook at . To Search all the 6th Sangayana Talks, visit Youtube & type 1954
ခေါမဒူဿသုတ် (၂၂၉.၁၂) (၃၀၁/၄၃၅) - ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာတင် တရားတော်များ (1954-1956*)
ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာတင် တရားတော်များ (1954-1956*) မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမေး၍ မင်းကွန်းဆရာတော် ဘုရားကြီးဖြေဆိုသည် - ခေါမဒူဿသုတ် (၂၂၉.၁၂) (၃၀၁/၄၃၅) (ဓမ္မဒါန Dhamma Dana YouTube Channel), also on FaceBook at https://www.facebook.com/Dhamma-Dana-399301336796561 . To Sear
စေတနာ ကံ သင်္ခါရ တရားတော် (၂၃-၁၁-၁၉၆၀) (၁၀/၁၅ စ) - မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဝိမလ
စေတနာ ကံ သင်္ခါရ တရားတော် (၂၃-၁၁-၁၉၆၀) (၁၀/၁၅ စ) - အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဝိမလ Mogok Sayadaw gyi U Vimala, (ဓမ္မဒါန Dhamma Dana YouTube Channel, http://youtube.com/DhammaDana, also on https://www.facebook.com/Dhamma-Dana-399301336796561
စေတနာသုံးတန် တရားတော် - မြစကြာ ဆရာတော် ဦးဣန္ဒကာဘိဝံသ
စေတနာသုံးတန် တရားတော် - မြစကြာ ဆရာတော် ဦးဣန္ဒကာဘိဝံသ - Mya Sat Kyar Sayadaw U Indaka-bhivamsa စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး၊ မြစကြာကျောင်းတိုက် ပဓာန နာယကဆရာတော် - (ဓမ္မဒါန Dhamma Dana YouTube Channel, http://youtube.com/DhammaDana, also at https://www.facebook.com/Dh
စေတိယပူဇာ မြတ်မင်္ဂလာအကြောင်း -- အရှင်​နန္ဒမာလာဘိဝံသ
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီး အရှင်​နန္ဒမာလာဘိဝံသ၊​ (Dr. NandaMarlarBhivamsa) အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ ပါဠိ ပါရဂူ၊ အဂ္ဂမဟာဂန္တဝါစက ပဏ္ဍိတ၊ ဟောကြား တော်မူအပ်သော မိမိကိုယ်ကို အောင်နိုင်ရေး အကြောင်း တရားဒေသနာတော် မန္တလေးမြို့ (၂၇-၁၁-၂၀၁၆) - YouTube Channel, http://youtube.com/Dhamm
စေတီ ထူပါ တရားတော် - သီတဂူဆရာတော် ရှင်ဥာဏိဿရ
စေတီ ထူပါ တရားတော် - သီတဂူဆရာတော် ရှင်ဥာဏိဿရ - အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ၊ Thitagu Sayadaw Dr Nanisarra - ဓမ္မဒါန Dhamma Dana YouTube Channel -
စေတီယပူဇာ ကာကွယ်ခြင်းတရားတော် (၁/၂) - သီတဂူဆရာတော် ဦးဥာဏိဿရ
သီတဂူဆရာတော် ဦးဥာဏိဿရ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဒမ္မဇောတိကဓဇ ဟောကြားတော်မူသော စေတီယပူဇာ ကာကွယ်ခြင်းတရားတော် (၁/၂) - Thitagu Sayadaw Dr Nanisarra - D. Litt, (ဓမ္မဒါန Dhamma Dana YouTube Channel, UK, http://youtube.com/DhammaDana), also at https://www.
စေတီယပူဇာ ကာကွယ်ခြင်းတရားတော် (၂/၂) - သီတဂူဆရာတော် ဦးဥာဏိဿရ
သီတဂူဆရာတော် ဦးဥာဏိဿရ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဒမ္မဇောတိကဓဇ ဟောကြားတော်မူသော စေတီယပူဇာ ကာကွယ်ခြင်းတရားတော် (၂/၂) - Thitagu Sayadaw Dr Nanisarra - D. Litt, (ဓမ္မဒါန Dhamma Dana YouTube Channel, UK, http://youtube.com/DhammaDana), also at https://www.
စေတီလေးပါး တရားတော် (၁/၂) - သီတဂူဆရာတော် ဦးဥာဏိဿရ
စေတီလေးပါး တရားတော် (၁/၂) - သီတဂူဆရာတော် ဦးဥာဏိဿရ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဒမ္မဇောတိကဓဇ - Thitagu Sayadaw Dr Nanisarra - D. Litt, (ဓမ္မဒါန Dhamma Dana YouTube Channel, UK, http://youtube.com/DhammaDana), also at https://www.facebook.com/Dhamma-Dana-399301336796
စေတီလေးပါး တရားတော် (၂/၂) - သီတဂူဆရာတော် ဦးဥာဏိဿရ
စေတီလေးပါး တရားတော် (၂/၂) - သီတဂူဆရာတော် ဦးဥာဏိဿရ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဒမ္မဇောတိကဓဇ - Thitagu Sayadaw Dr Nanisarra - D. Litt, (ဓမ္မဒါန Dhamma Dana YouTube Channel, UK, http://youtube.com/DhammaDana), also at https://www.facebook.com/Dhamma-Dana-399301336796
စေတောခိလသုတ် (၇၁) - ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာတင် တရားတော်များ - မဟာစည်ဆရာတော်မေး - မင်းကွန်းဆရာတော်ဖြေ။
ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာတင် တရားတော်များ - မဟာစည်ဆရာတော်မေး - မင်းကွန်းဆရာတော်ဖြေ။ (၁၉၅၄-၁၉၅၆) စေတောခိလသုတ် (၇၁) (၂၂၅/၄၃၅) (Sixth Buddhist Council - Rangoon, Burma (1954-1956) - - (ဓမ္မဒါန Dhamma Dana YouTube Channel, UK), also at https://www.facebook.com/Dhamma-Dana-399
ဇေတဝနသုတ္တန်(အပိုင်း၊ ၁-က) ဖားအောက်တောရ ဆရာတော်
ဖားအောက်တောရ ဆရာတော် ဟောကြားတော်မူသောဇေတဝနသုတ္တန်(အပိုင်း၊ ၁-က) (ကံမြင့်ကျောင်းတိုက်) (မော်လ မြိုင်) - ဓမ္မဒါန Dhamma Dana YouTube Channel
ဇေတဝနသုတ္တန်(အပိုင်း၊ ၁-ခ) - ဖားအောက်တောရ ဆရာတော်
ဖားအောက်တောရ ဆရာတော် (Pa-Auk Sayadaw) ဟောကြားတော်မူသောဇေတဝနသုတ္တန်(အပိုင်း၊ ၁-ခ) (ကံမြင့်ကျောင်းတိုက်) - ဓမ္မဒါန Dhamma Dana YouTube Channel
ဇေတဝနသုတ္တန်(အပိုင်း၊ ၂) - ဖားအောက်တောရ ဆရာတော်
ဖားအောက်တောရ ဆရာတော် (Pa-Auk Sayadaw) ဟောကြားတော်မူသောဇေတဝနသုတ္တန်(အပိုင်း၊ ၂) (ကံမြင့်ကျောင်းတိုက်) - ဓမ္မဒါန Dhamma Dana YouTube Channel
ဇော ခုနှစ်ကြိမ် တရားတော် (၁၀-၇-၁၉၅၈) (၂/၆ ဇ) - ၊ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဝိမလ
၊ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဝိမလ၊ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ။ Mogok Sayadaw gyi U Vimala, (ဓမ္မဒါန Dhamma Dana YouTube Channel, http://youtube.com/DhammaDana, also at https://www.facebook.com/DhammaDanaMyanmar
ဇောတိက ဥပမာပြ တရားတော် (၁၁-၁၀-၁၉၅၆) (၁/၆ ဇ) - မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဝိမလ
ဇောတိက ဥပမာပြ တရားတော်(၁၁-၁၀-၁၉၅၆) (၁/၆ ဇ)၊ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဝိမလ၊ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ။ Mogok Sayadaw gyi U Vimala, (ဓမ္မဒါန Dhamma Dana YouTube Channel, http://youtube.com/DhammaDana, also at https://www.facebook.com/DhammaDanaMyanmar
တောင့်တတိုင်းရ လှူဒါန တရားတော် (၁/၂) (၄၉/၉၅)၊ ကြာနီကန် ဆရာတော် ဦးဇဋိလ
တောင့်တတိုင်းရ လှူဒါန တရားတော် (၁/၂) (၄၉/၉၅)၊ ကြာနီကန် ဆရာတော် ဦးဇဋိလ။ Kyarnikan Sayadaw U Jadila. (Dhamma Dana YouTube Channel), also at
တောင့်တတိုင်းရ လှူဒါန တရားတော် (၂/၂) (၅၀/၉၅)၊ ကြာနီကန် ဆရာတော် ဦးဇဋိလ
တောင့်တတိုင်းရ လှူဒါန တရားတော် (၂/၂) (၅၀/၉၅)၊ ကြာနီကန် ဆရာတော် ဦးဇဋိလ။ Kyarnikan Sayadaw U Jadila. (Dhamma Dana YouTube Channel), also at https://www.facebook.com/DhammaDanaMyanmar
တောင်ကြိပ်ခံရသည်မှ လွတ်ရေး ကျွတ်ရေး တရားတော် (၂၃/၂၉ တ) - မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဝိမလ
တောင်ကြိပ်ခံရသည်မှ လွတ်ရေး ကျွတ်ရေး တရားတော် (၁၅-၉-၁၉၆၂) (၂၃/၂၉ တ) - မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဝိမလ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ။ Mogok Sayadaw gyi U Vimala, (ဓမ္မဒါန Dhamma Dana YouTube Channel, http://youtube.com/DhammaDana, also at https://www.facebook.com/DhammaDanaMy
တောင်ကြိပ်ပွဲနှင့် မဂ္ဂဗြဟ္မစရိယာ ကျင့်ရန် တရားတော် (၂၈/၂၉ တ) မိုးကုတ်ဆရာတော် ဘုရားကြီး ဦးဝိမလ
တောင်ကြိပ်ပွဲနှင့် မဂ္ဂဗြဟ္မစရိယာ ကျင့်ရန် တရားတော် (၂၈/၂၉ တ) မိုးကုတ်ဆရာတော် ဘုရားကြီး ဦးဝိမလ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ။ Mogok Sayadaw gyi U Vimala, (ဓမ္မဒါန Dhamma Dana YouTube Channel, http://youtube.com/DhammaDana, also at https://www.facebook.com/DhammaDanaMyanmar )